Kedu ihe kpatara HubSpot ji nweta CRM bụ Skyrocketing | Martech Zone
N’oge azụmahịa, ijikwa ozi gbasara kọntaktị gị na ndị ahịa gị esighi ike. Agbanyeghị, ka azụmaahịa gị na-etolite yana ka ị na-enwetakwu ndị ahịa ma were ndị ọrụ n'ọrụ, ozi gbasara kọntaktị na-agbasasịkwa na mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ọhụụ, akwụkwọ mmado, na ncheta na-enweghị isi.
Ọganihu azụmaahịa dị ịtụnanya na ọ na-abịa mkpa ịhazi ozi gị. Nke a bụ ebe Hub Spot CRM abata.
Hub Spot CRM Emere site na ala iji kwadebe maka ụwa nke oge a. Nghọta na akpaka ebe usoro ndị ọzọ dị mgbagwoju anya na ntuziaka, Hub Spot CRM na-elekọta obere nkọwa niile - ịdenye ozi ịntanetị, ndekọ ndekọ, na ijikwa data gị - ịhapụ oge ire ahịa na usoro ahụ. Ọ na-agbaso dị ka otu n'ime ngwaahịa CRM kachasị mma maka obere azụmaahịa.
Ahịa na ahịa emetụ aka dị ka email, ekwentị, weebụsaịtị, nkata ndụ, na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, na-enye ndị ọrụ na-eche ihu ndị ọrụ nkọwa zuru oke na ọrụ onye ahịa yana nzaghachi.
Ndị a bụ ihe kpatara HubSpot CRM bụ nhọrọ kachasị elu maka obere azụmaahịa:
Jikwaa pipeline gị ma ghara ikwe ka ihe ọ bụla mee site na cracks. HubSpot CRM na - enyere gị aka ịhazi ozi gbasara kọntaktị gị niile. Nke a na - enyere ndị otu gị aka ịmata onye onye ahịa gwara ya na ihe ha kwuru. HubSpot's pipeline management tool ga-enyere gị aka ịdebe azụmahịa gị ka ị ghara ịhapụ ohere ọ bụla ọzọ.
Mgbe i tinyere azụmahịa ọhụrụ site na kọntaktị ma ọ bụ ndekọ ụlọ ọrụ, Hub Spot CRM na-azọpụta gị oge site populating ọtụtụ nke ndibiat ndekọ si na-akpaghị aka na ihe ndị kasị ụbọchị na ozi. You'll ga-akwụsị igbu oge na ntinye akwụkwọ data iji nwee ike izipu ozi ịntanetị, kpọkwuo oku ekwentị, wee kụọ oke gị.
Ma ị nwere usoro ire ahịa ma ọ bụ na ị na-amalite site na ọkọ, Hub Spot CRM na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta gị ezigbo usoro.
Tinye, dezie, ma hichapụ usoro nkebi na akụrụngwa na-enweghị enyemaka site na IT, ma kwalite azụmahịa na-aga n'ihu site na ịnye ndị otu ọrụ ọrụ. Nwere ike ịdọrọ wee dobe azụmahịa n'etiti usoro mgbe ha mechara nke ọma.
Nweta ohere ị nwere 'mmekọrịta mmekọrịta zuru oke. HubSpot CRM nwere ike ịdọrọ mmekọrịta ndị dị adị dị ka ozi ịntanetị gara aga ma ọ bụ tinye nnyefe ozugbo otu atụmanya gbanwere. Oge agafeela ụbọchị ịchọrọ iji aka gị abanye na ozi ịntanetị, oku, na nzukọ. HubSpot nwere ike soro mmekọrịta gị na kọntaktị gị yana data niile metụtara na-akpaghị aka na-echekwa na CRM. A na-echekwa mmekọrịta ọ bụla na usoro iheomume dị mma. Ndị otu gị nwere ike ịkwalite ọnọdụ a mgbe ị na-eru atụmanya ma mee ka ụzọ ha dịkwuo mma.
HubSpot na-enye gị nghọta maka ụlọ ọrụ ndị na-eleta saịtị gị n'oge ọ bụla. You'll ga-amata mmadụ ole gara leta gị na oge ole, na-enyere gị aka inwe atụmanya nwere mmasị. Usoro a na - enyere ndị azụmaahịa aka ibuso ụzọ isi na - eduga ha karịa ịchụso atụmanya oyi
Nwere ike dozie atụmanya site na iji ọtụtụ njirisi nzacha dị iche iche dịka ọdịdị ala, ogo ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ nleta, na ndị ọzọ. I nwekwara ike ịmepụta echiche ọdịnala maka ndị ahịa gị ka ha wee nwee ike ịchụso naanị atụmanya dị ha mkpa. You'll ga-etinye oge dị ntakịrị n'iwepu ụzọ, yana oge na-emechi.
Nkwupụta ahịa. Adaberela na usoro Excel siri ike ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ azụ. Nweta oke ihe na metrik dị ka ozi ịntanetị ezitere, oku akpọrọ, nzukọ edere, na azụmahịa mechiri iji ghọta ihe otu gị na-eme nke ọma na ihe ị ga-emeziwanye.
Ogwe ahịa ahụ na-enye gị visibiliti zuru oke na arụmọrụ otu na otu, yana uru yana ahụike zuru oke nke pipeline gị. Site na ịchọpụta ebe nkwụnye ego gị na-aba ụba, ịnwere ike ijikọ ndị otu gị ọnụ ahịa dị mma.
Hub Spot CRM na-enye a set nke dị mkpa ahịa akụkọ, 100% free. Akụkọ ndị a na-ekpuchi ngọngọ ụlọ nke ịkọ akụkọ, dị ka amụma azụmahịa, arụmọrụ ahịa, nrụpụta, yana azụmahịa mechiri ebumnuche anyị.
Usoro ire ahịa a na-ekwughachi bụ isi ihe iji nwalee mmegharị ahịa na atụmatụ ọhụrụ. Data ị debere na HubSpot ga - enyere gị aka ịhụ usoro dị irè na enweghị isi na omume ahịa. Ihe omuma a gha enyere gi aka ịzụlite ahia gi nke oma.
Email nsuso. Site na nsuso email, ị nweta ọkwa desktọọpụ nke abụọ atụmanya ga-emepe email gị, pịa njikọ n'ime, ma ọ bụ budata mgbakwunye.
Nweta ọba akwụkwọ ndebiri ndebiri ahaziri maka usoro ọ bụla nke njem onye ahịa gị ma ọ bụ gbanwee ozi ịntanetị kachasị mma na ndebiri ị nwere ike hazie. Ndebiri gị ga-abụ otu pịapụ n'ime igbe mbata gị - ma ị na-eji Office 365, Outlook, ma ọ bụ Gmail - na-echekwa gị oge ọrụ ịntanetị.
Nkata na atụmanya na ndị ahịa na ozugbo. HubSpot CRM gụnyere ngwaọrụ n'efu maka nkata ndụ, ozi otu, na bọọlụ, gbakwunyere igbe ozi zuru ụwa ọnụ nke na-enye ndị ahịa, ịre ahịa, na ndị ọrụ ndị ahịa otu ebe iji lelee, jikwaa, ma zaghachi mkparịta ụka niile - n'agbanyeghị agbanyela ozi izi ozi ha si. .
Jiri nkata na-akparịta ụka iji jikọọ ndị na-akparịta ụka na-akpaghị aka na ndị ziri ezi na otu gị: na-ajụ ajụjụ ndị ahịa na ndị ọrụ gị, ma na-eduga onye na-ere ahịa nwere mmekọrịta ahụ.
Nwere ike ịhazi wijetị nkata gị ka ọ daba na ụdị nke akara gị, ma mepụta ozi nnabata maka iche maka ibe weebụ ma ọ bụ akụkụ nke ndị na-ege gị ntị ka ị nwee ike ijikọ na ndị ọbịa saịtị ahụ dị mkpa - ozugbo ha kacha arụ ọrụ.
Mkparịta ụka ọ bụla na-akpaghị aka echekwara ma chekwaa na igbe mbata mkparịta ụka gị yana na usoro iheomume kọntaktị ka ndị otu gị nwee ọnọdụ zuru oke yana ọhụụ doro anya nke mmekọrịta ọ bụla.
Mee ka ibu ahụ dị mfe ma mee ka ọ dịrị ndị otu gị mfe inwe mkparịta ụka ahaziri iche na ọnụ ọgụgụ nke boti nkata.
Bots na-enyere gị aka iru eru, nzukọ akwụkwọ, nye azịza nye ajụjụ nkwado ndị ahịa, yana ndị ọzọ, yabụ ndị otu gị nwere ike ilekwasị anya na mkparịta ụka kachasị mkpa.
Ebe ọ bụ na ejikọtara HubSpot na-ewu chatbot na HubSpot n'efu CRM, bọọlụ gị nwere ike ịnapụta ndị enyi, ozi ahaziri nke ọma dabere na ozi ị maraworị gbasara kọntaktị.
Gbalịa Hubspot CRM Taa n'efu!
Mara: Ana m eji nke m Njikọ njikọ Hubspot ke ibuotikọ emi.
Tags: nkata botfreecrm efugmail crmokpokoroHub Spot CRMnzute botụlọ ọrụ 365 crmechiche crmpipelineatụmanyaatụmanya akụkọ ihe mere emepipeline ahịaahịa akụkọakara azụmahịasoro na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọbịa
Etu esi melite ahụmịhe ndị ahịa e-Commerce